यी महान क्रिकेटरले अन्तिम प्रतियोगितामा बनाए रेकर्ड, यस्तो सम्मानका साथ गरियो विदाइ, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यी महान क्रिकेटरले अन्तिम प्रतियोगितामा बनाए रेकर्ड, यस्तो सम्मानका साथ गरियो विदाइ
एजेन्सी। श्रीलंकाका क्रिकेटर रंगना हेराथले इङल्याण्डविरुद्धको टेस्ट सिरिजको पहिलो टेस्टमा श्रीलंकाको गल्ले मैदानमा आफ्नो १०० टेस्ट विकेट पूरा गरे । उनी एउटै मैदानमा १०० टेस्ट विकेट लिले श्रीलंकाका दोस्रो र संसारका तेस्रो बलर बने । उनीभन्दा पहिले श्रीलंकाका मुथैया मुरलीधरणले यही गल्ले मैदानमा १०० टेस्ट विकेट लिएका थिए । मुरलीधरणले गल्लेका अलावा श्रीलंकाकै क्याण्डी, एसएससी र कोलम्बो क्रिकेट ग्राउण्डमा पनि १०० टेस्ट विकेट लिइसकेका छन् । रंगनाको यो अन्तिम टेस्ट हो ।
रंगना र मुरलीधरणका अलावाइङल्याण्डका बलर जेम्स एण्डरसनले पनि एउटै मैदानमा १०० टेस्ट विकेट लिएका छन् । उनले इङल्याण्डको लर्डस मैदानमा १०० विकेट लिएका छन् । एण्डरसनले टेस्टमा ५६४ विकेट लिएका छन् । उनी टेस्टमा सबेभन्दा धेरै विकेट लिने फास्ट बलर हुन् । ४० वर्षका रंगनाको लागि गल्ले मैदान सधैं भाग्यशाली रह्यो । उनले ९९९ मा यही मैदानमा अस्ट्रेलियाविरुद्ध डेब्यू गरेका थिए ।
हेराथले यही मैदानमा २०१६ मा पाकिस्तानविरुद्ध ह्याट्रिक गरेका थिए । रंगनाले यहाँ १९ टेस्टमा १०० विकेट लिएका हुन् । उनले करिअरमा २६ पटक ५ वा सोभन्दा बढी विकेट लिएका छन् । उनले अहिलेसम्म ९३ टेस्टमा २.८० को इकोनोमीमा बलिङ गर्दै ४३१ विकेट लिएका छन् ।